रसिया | Ratopati
रसियामा राष्ट्रिपति पुटिनले गठन गरे ९ उपप्रधानमन्त्रीसहितको नयाँ मन्त्रिमण्डल, कसले के जिम्मेवारी पाए ? access_timeमाघ ८, २०७६
एजेन्सी । रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् । मिखाइल मिशुष्टिनलाई देशको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेलगत्तै राष्ट्रपति पुटिनले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका हुन् । राष्ट्रपति पुटिनले नयाँ सरकारमा ९ जनालाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्, ...
बेलारुसलाई रुसमा मिलाउन चाहन्छन् पुटिन ? access_timeमाघ ७, २०७६
मस्को । बेलारुसको राजधानी मिंस्कमा २० डिसेम्बरका दिन करिब दुई हजार मानिस भेला भएर ‘साम्राज्यवादी रुस’ को विरोधमा नारा लगाइरहेका थिए । उनीहरु रुस र बेलारुसबीच सम्भावित गठजोडको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै थिए । त्यतिबेला दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्धलाई ल...
महाशक्ति रुसका ‘दोस्रो शक्तिशाली’ व्यक्ति मिखाइल मिशुस्तिन को हुन् ? access_timeमाघ ५, २०७६
एजेन्सी । रुसले भर्खरै नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा मिखाइल मिशुस्तिनलाई चुन्यो । प्रधानमन्त्री चयन हुनु एक दिनअघिसम्म पनि मिशुस्तिनले यो पद पाउँदैछन् भन्ने कमैलाई थाहा थियो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका ‘छाया’ मानिने दिमित्री मेद्भेदेव लामो समय प्रधानमन्...
डोपिङमा डुब्यो रसिया access_timeमंसिर २४, २०७६
एजेन्सी । विश्व एन्टी डोपिङ एजेन्सी (वाडा) ले रसियालाई चार वर्ष ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता खेल्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ । वाडाले रसियालाई सन् २०२० मा जापानमा हुने ओलम्पिक खेलकुद र सन् २०२२ मा कतारमा हुने फिफा विश्वकप फुटबल खेल्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । यद्...
फेदोर नामको रोबोट सफलतापूर्वक अन्तरिक्ष केन्द्रमा अवतरण access_timeभदौ १०, २०७६
मस्को– रुसले पहिलो मानवाकृत (ह्युमनोइड) रोबोट सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आइएसएस) मा मङ्गलबार स्थापना गरेको छ । गत साता रुसको यो अभियान असफल भएको थियो । फेदोर नाम दिइएको मान्छेकै शरीर जत्रो रोबोटले मानिस झैं यताउता हिँड्ने र वरपरबाट सामा...